laacib » Waa Kuwee Saxiixyadii Guuleystay Ee Laga Sameeyay Xagaagii Lasoo Dhaafay Shanta Horyaal Ee Ugu Waaweyn Qaaradda Yurub?
Waa Kuwee Saxiixyadii Guuleystay Ee Laga Sameeyay Xagaagii Lasoo Dhaafay Shanta Horyaal Ee Ugu Waaweyn Qaaradda Yurub?
Kooxaha ka dhisan horyaalada yurub waxaa loo ogol yahay intooda badan iney dukaameystaan laba mar – waqtiga koowaad waa xagaaga ka hor inta aysan bilaaban fasal ciyaareedyada cusub, midna waa marka uu bilowdo sanad cusub oo ah suuqa jiilaalka.
Sidaas darteed waxaa qiimeyn lagu sameeyay saxiixyadii xagaagii laga soo gudbay ay sameeyeen kooxaha ka dhisan shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda yurub, waxaana lasoo bandhigay kuwooda guuleystay ee waxqabadka muuqda kusoo bandhigay gurigooda cusub.
Paco Alcacer: Xiddigii hore Barcelona wuxuu kaliya saftay fasalkaan 4-kulan dhamaan tartamada oo dhan tan iyo markii uu ku biiray Dortmund, 7-gool ayuu dhaliyay xiddigaan wuxuuna laacibkii Signal Iduna Park ka dhisan kula joogaa amaah.
Xaqiiqdii 25-jirkaan hadda waa hogaamiyaha gooldhalinta Bundesliga isagoo dhaliyay 6-gool, wuxuuna kaliya saftay 81-daqiiqo isku cel-celis ahaan, wuxuuna u muuqdaa mid si joogto ah u jecleysan doona inuu kula joogo Dortmund.
Jonathan Bamba: Fasal ciyaareedkii hore wuxuu horyaalka France ka dhaliyay 7-gool, balse kaliya 9-kulan oo uu fasalkaan saftay isla horyaalkaan ayuu dhaliyay 7-gool, xiddigaan waqtigiisa cusub ee Nice wuxuu noqday mid guul ku bilowday.
Saint-Etienne ayuu si xor ah kag yimid, garabkaan hadda wuxuu hal gool ka dambeeyaa Neymar Junior iyo Kylian Mbappe oo si wadajir ah u hogaaminaya gooldhalinta horyaalkaas.
Joao Cancelo: Layaab ma lahan in liiskaan lagu soo daro daafacaan tayada wanaagsan ee reer Portugal, kaliya 40.4 Malyan oo Yuuro ayuu ku yimid Turin wuxuuna muujiyay awoodiisa.
Daafacii hore Valencia kaas oo fasalkii hore amaah ku qaatay Inter Milan ayaa si awood leh ku qabsaday booska daafaca midig ee laacibkii.
Gonzalo Higuain: Laga yaabee iney Ac Milan ka careysan tahay inuu baxay Andre Silva kaas oo waqti wacan ku qaadanaya La Liga, balse ugu yaraan badal macqul ah ayey heleen.
Higuain kaliya 18 Malyan oo Yuuro ayuu hadda ugu fadhiyaa, inkastoo la siiyay dooq ay ku iibsadaan karaan, hadana xiddigaan 6-gool ayuu dhaliyay 7-kulan uu saftay dhamaan tartamada oo dhan.
Jorginho: 57 Malyan oo Yuuro ayuu kooxdiisa ugu fadhiyaa, waa mid joogto ka ah laacibkii maadaama uu ka hoos ciyaarayo Maurizio Sarri.
Xiddigaan wuxuu badanaa sameeyaa 100% baasas saxan kulamada kooxdiisa, sidoo kalana wuxuu ku dadaalaa inuu kubadda halmar taabto.
Waxaa jira liis ciyaartoy ah oo soo raaca waxaana ka mid ah James Maddison oo kusoo biiray fasalkaan laacibkii Leicester City ee horyaalka Ingiriiska, goolhaye Rui Patricio oo sidoo kale yimid Ingiriiska kuna soo biiray laacibkii Wolverhampton.
Weeraryahanka reer Poland Krzysztof Piatek ayaa wacdaro ka dhigaya Serie A-da, maadaama uu hogaanka u hayo tartnka gooldhalinta. Xiddigaan 8-dii kulan uu fasalkaan ciyaaray wuxuu dhaliyay goolal aan caadi aheyn 4-gool wuxuuka dhaliya Lecce kulan ka tirsan Copa Italia, halka 9-gool uu dhaliyay 7-kulan ee ugu horreysay horyaalka.